SAINTE MARIE : Olona 400 nahazo karapanondrom-pirenena, 200 nisitraka kopia
Araka ny efa voalaza ombieny ombieny dia hiatrika fifidianana ny firenena malagasy amin’ny taona 2018 io. 2 janvier 2018
Araka izany dia efa mandeha avokoa ny endrika fiomanana amin’izany zava-dehibe miandry ny firenena izany. Isan’izany ny fanatanterahana ny hetsika fitsarana mitety vohitra any amin’ny faritra sy toerana maro manerana ny Nosy, indrindra ireo voasokajy ho lavitra sy saro-dalana. Ankehitriny àry dia fantatra fa nifarana omaly ny fitsarana mitety vohitra rehefa notontosaina nandritra ny andro vitsivitsy tao amin’ny tanànan’i Sainte Marie.
Hetsika izay tsara tsiahivina hatrany fa natao hanomezana kopia sy karapanondro ho an’ireo vahoaka mbola tsy misitraka izany antontan-taratasy izany. Hatramin’ny nanombohana azy dia efa maherin’ny 400 any ny olona izay nahazo karapanondro, raha manodidina ny 200 mahery eo kosa no nisitraka kopia. Miaraka amin’ny avy eo anivon’ny prefektiora manao izany asa fitetezam-bohitra izany ny avy ao amin’ny kaominina ambonivohitr’i Sainte Marie, ny avy amin’ny fampianarana ary ny avy ao amin’ny fahasalamana.
Ireto farany izay niara-nifarimbona hatramin’ny farany amin’ny fanatanterahana izany. Araka izany àry dia ny avy ao amin’ny prefektiora no nitarika ny ekipa tamin’izany asa izany. Tsara hatrany ny manamarika fa ankoatra ny fifidianana dia sehatra maro no ilaina ireo antotan-taratasy ireo ka tokony fanararaotra mihitsy ny fotoana toy izay nisy tao Sainte Marie.